Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana · Oktobra, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana · Oktobra, 2011
Tantara mikasika ny Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana tamin'ny Oktobra, 2011
Tiorkia25 Oktobra 2011
Ejiptiana iray fantatra amin'ny anarana hoe Magid no olona voalohany any Ejipta nilaza imasom-bahoaka fa mitondra ny otrikaretina VIH. Ny fanadihadiana no nahitàna fa Ejiptiana manodidina ny 11.000 eo no miaina miaraka amin'ny VIH, nefa io isa io dia mety hiakatra avo tokoa. Mbola be ny manafina noho ny fitsaratsaram-poana.
Tonizia25 Oktobra 2011
Tonizia24 Oktobra 2011
Syria24 Oktobra 2011
Akanjo aro bàla, satroby vita tamin'ny Kevelar sy basy fitondra an'ady eny an-tànany, 13 lahy no mamakivaky ireo olona marobe mihorakoraka miaraka amin'ny dona kely eny an-tsoroka, fiandohan'ny volana septambra, tao an-tanànan'i Boustan al-Diwan, ao Homs. Taraiky mijery ny fanamiana ny fakantsary, ireo galona kely miloko maitso eo an-tsoroka anaty...
Tiorkia24 Oktobra 2011